Waa maxay xogaha qarsoon ee Madeira ku gadaaman? | KEYDMEDIA ENGLISH
Waa maxay xogaha qarsoon ee Madeira ku gadaaman?
Dr. Walters Samah, oo u dhashay Cameroon heystana dhalashada, Canada, kana mid ahaa madaxa AMISOM ayaa, bartamihii 2020, guda AMISOM, ku faafiyay, wabixin qarsoodi ah taasoo lagu sheegay in Madeira ku sifoobay, maamul xumo, cabsi galin, tuhun, hanjabaad, musuqmaasuq, eex, iyo cagajugleyn.
MUQDISHO, Soomaaliya - Guddoomiyahii Guddiga Midowga Afrika (AU), Dr. Nkosazana Dlamini-Zuma, ayaa 7 October 2015, Danjire Francisco Jose Madeira, oo u dhashay Mozambique, u magacaawday inuu noqdo ergaygeeda gaarka ah ee Soomaaliya iyo madaxa howlgalka AMISOM, waxaana lagu beddelay, Ambassador Maman Sambo Sidikou oo u dhashay dalka Niger.
Tan iyo xilligaas, Howlgalka Midowga Afrika ee Soomaaliya, waxaa dul hoganayay eedo la xariira musuqmaasuq baahsan, maamul xumo, caga jugleyn iyo faragelin siyaasadeed oo gudaha dalka ah, kuwaas oo si weyn u dhaawacay kalsoonida lagu qabo Howl-galka nabad ilaalinta ee Addis ababa laga xukumayay.
Wixii ka danbeeyay magacaabiddii Francisco Madeira, waxaa si weyn hoos ugu dhacay howl-galladii ka dhanka ahaa Kooxda Al-Shabaab, ee sida weyn uga socday gobollda Shabeelooyinka, waxayna ciidamada AMISOM, faarujiyeen dhow degaan oo kooxda xiriirka la leh Al-qaacida laga xoreeyay ka hore 2013.
Sida ay KON, baahisay hal sano ka hor, [9 April 2021] Madeira, wuxuu diiday bixinta magta dad shacab ah oo AMISOM, ku xasuuqday, degmada Qoryoolay ee Gobalka Shabeellaha hoose 2016-kii, sida ku cad warqado ay is weydaar-sadeen, AMISOM, Gar-yaqaanno Soomaali ah iyo Wasaaradda Haweenka ee DF.
Waraaq tirsigeedu yahay 016/2021, oo 31/3/2021, ka soo baxday, Somali South Central Law Firm, loona diray Francisco Madeira, ayaa lagu sheegay in loo baahan yahay bixinta magta dhibanayaasha, waxaana warqadda lagu caddeeyay magta uu ruux waliba xaqa u leeyahay, yeelkeede Madeira, waxba kama soo qaadin.
Habraaca la maro, marka AMISOM, mag siineyso qoysaska dadka ay ciidamadeedu dileen, ayaa ahaa in madaxa howlgalka, uu arrinka iyo sida wax u dhaceen la wadaago, madaxda Midowga Afrika, kadibna lacagta lagu soo shubo AMISOM, ka hor inta aan lagu wareejin qoysaskii magta lahaa, Madeira middaas ma sameyn.
26-kii May 2020, 18 xubnood oo ka tirsan Aqalka Hoose iyo Aqalka Sare ee Baarlamaankii 10-aad ee JFS, ayaa saxiixay codsi ah in xilka laga qaado Madeira, taasoo ka dhalatay hadal uu ka jeediyay shirkii Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay 21-kii May, markaasoo uu sheegay in Axmed Madoobe kaliya la heshiiyay siyaasiyiinta ay isku heybta yihiin.
Dr. Walters Samah, oo u dhashay Cameroon heystana dhalashada, Canada, kana mid ahaa madaxa AMISOM ayaa, bartamihii 2020, gudaha AMISOM, ku faafiyay, wabixin qarsoodi ah taasoo lagu sheegay in Madeira ku sifoobay, maamul xumo, cabsi galin, tuhun, hanjabaad, musuqmaasuq, eex, iyo cagajugleyn.
Walters Samah, wuxuu ka digay in haddii aan wax laga qaban, sia wax ku wado Francisco, uu fashilmayo qorshaha howl-galka oo ah taageerada nabadda iyo garab istaagga geeddi-socodka siyaasadda Soomaaliya, wuxuuna si weyn u muujyay in Madeira, uusan dhexdhexaad ka ahayn siyaasadda oo uu Farmaajo ku daaban yahay.
Sidoo kale, warbixintaas, waxa ay Madeira, ku eedeysay inuu si xun ula dhaqmo shaqaalaha, isagoo xilliyada qaar si ula kac ah u diida qaar ka mid ah xuquuqaadka, Mucaaradku Farmaajo, ayaana in muddo ah Madeira, u arkayay shaqsi gacmaha kula jira howlo siyaasadeed oo aan shaqadiisa ahayn.
Francisco Madeira, isagoo Farmaajo adeegsanaya, ayuu Dr. Walters Samah, ka buriyay Muqdisho, waxaana Walters, lagu eedeeyay inuu si dhow ula shaqeynayo shaqsiyaad ajnab ah iyo kuwa maxaliga ah oo kasoo horjeeda dowladda Soomaalia, isla-markaana uu la wadaagay xogo sir ah oo la xariira hay’adaha Dowladda.